चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने र नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको गोप्य भेट !
काठमाडौ : चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र नेत्र विक्रम चन्द ” विप्लव ” को भेट भएको स्रोतले बताएको छ । शनिबार राती एक छलफलको कार्यक्रममा रवि र विप्लवको
भेट भएको बुझिएको छ । उक्त भेटमा दुबैले एक अर्कालाई बधाई दिएको स्रोतले बताएको छ । रविले विप्लवलाई केही समयपछी हाम्रो टेलिभिजनमा एउटा अन्तर्वार्ताको कुरा पनि राखेका थिए ।
अष्ट्रेलियन क्याम्प’ अझै सुनसान !
गलकोट : कुनै दिन पर्यटकले भरिभराउ हुने कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित अष्ट्रेलियन क्याम्पमा चहलपहल हराएको एक वर्ष भयो । कोरो’ना महामा’रीका कारण थलिएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय विस्तारै लयमा फर्कँदै आए पनि अष्ट्रेलियन क्याम्प भने सुनसान छ ।
फाट्टफुट्ट आन्तरिक पर्यटकबाहेक अहिले हाइकिङ गन्तव्यका रूपमा रहेको चर्चित अष्ट्रे’लियन क्याम्प सुनसान भएको अष्ट्रेलियन क्याम्पका पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।
कुनै बेलाको गौचरन ठूलो खर्क अहिले पर्यटनका लागि प्रख्यात भए पनि को’रोनाले समस्या ल्याएको ट्रेकिङ व्यवसायी बताउँछन् । पोखराको फेदीदेखि पदयात्रामार्फत धम्पुस हुँदै अष्ट्रेलियन क्याम्प र अष्ट्रेलियन क्याम्प हुँदै फर्किँदा काँडे आउने पदमार्गको रुट छ तर पछिल्लो समय धम्पुससम्म सडक पुगेपछि धम्पुसबाट एक घण्टाको पदयात्रा गरी अष्ट्रेलियन क्याम्प पुग्न सकिन्छ ।
“यो स्थान विशेषगरी विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ, सिजनमा पूरै क्याम्प नै भरिने गरी पर्यटक आउँथे”, केसीले भन्नुभयो, “सिजनको समयमा झण्डै दैनिक ३०० विदेशी पर्यटक आउने अष्ट्रेलियन क्याम्प एक वर्षदेखि सुनसान छ ।” को’रोनापछि केही आन्तरिक पर्यटक हाइकिङका लागि मात्रै आउने गरेको केसीको भनाइ छ ।
अष्ट्रेलियन क्याम्पमा झण्डै रु तीन करोड लगानीमा होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनुभएका उहाँले अहिलेजस्तो सुनसान २० वर्षको अव’धिमा कहिल्यै नभएको बताउनुभयो । अहिले होटलमा कामदार छैनन् । परिवारका सदस्यमात्रै पर्यटक कुरेर बस्दै आएका छन् । कोरोनाअघि उक्त होटलमा चार कामदार थिए । अहिले होटलमा पर्यटक आउन छोडेपछि कामदारलाई बिदा दिइएको हो ।
पन्ध्र वर्षदेखि अष्ट्रेलियन क्याम्पमा माछापुच्छ लज सञ्चालन गर्दै आउनुभएका शिव देवकोटाले अहिले घाँस, दाउरा गरेर समय कटाएको बताउनुभयो । जङ्गलको बीचमा रहेको उक्त क्याम्प निकै मनमोहक छ । क्यापभित्र टेन्टमा बास बस्ने सुविधासमेत छ । टेन्टमा रात कटाउन पर्यटक रुचाउने गरेका छन् । “अहिलेको अवस्था शून्य छ, अब पर्यटक आउने आशा छ”, देवकोटाले भन्नुभयो, “पर्यटकलाई लक्षित गरी पालिएको बाख्रा, कुखुरा तथा तरकारी त्यसै छन्, पर्यटक आउँदा खोसाखोस हुन्थ्यो ।”
चरिचरन रहेको अष्ट्रेलियन क्याम्पलाई पहिला स्थानीयवासीले ठूलो खर्कका रूपमा चिन्थे । माछापुच्छे र अन्नपूर्ण हिमाल आँखै अगाडि देखिने, मिलेको भूबनोट र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण उक्त ठूलो खर्कमा २० वर्षभन्दा अघि अष्ट्रेलियालीहरुले क्याम्प खडा गरेर बास बसेका कारण ‘अष्ट्रेलियन क्याम्प’का नामले चिनिन थालेको हो । समुद्री सतहबाट दुई हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको अष्ट्रेलियन क्याम्प अहिले पर्यटकको पर्खाइमा छ ।
यहाँका होटल व्यवसायीले सडक नभएका कारण मानिसलाई बोकाएर खाद्यान्न लैजाने गरेका छन् । यस क्षेत्रमा खानेपानीको भने समस्या छ । विदेशी पर्यटक आउन केही ढिला हुने भएपछि आन्तरिक पर्यटकलाई ल्याउन प्रचारप्रसारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले को’रोनापछि घा’न्द्रुकमा आन्त’रिक पर्यटक बढेको बताउँदै अष्ट्रेलियन क्याम्पमा पनि नेपाली पर्यटक पुग्न शुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
२०७७ फाल्गुन २५, मंगलवार १३:१८ गते 1 Minute 725 Views